Wax Ka Ogoow Cuntooyinka Sare U Qaadi Karo Shaqada Sariirta - Aayaha
in CAAFIMAADKA, RAAXADA
Badanaa dadku way raadin lahaayeen haddii ay jiri lahayd hal cunno oo sare u qaadeysa rabitaankaaga xagga howsha gogosha, balse cuntooyin isku dheelitiran ayaa la sheegay inay sare u qaadaan dhanka nolosha iyo caafimaadka iyagoona dhammaantood ka qeyb qaadan kara xoojinta awoodda dhanka howsha sariirta.
Hoos ka akhriso qaar kamid ah cuntooyinka sare u qaada shahwada.
Cuntooyinka laga helo caroogta badda ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ay cuni jireen dadkii caanka ku ahaa jaceylka.
Ma jiraan caddeymo rasmi ah oo muujinaya in cunidda noolaha caroogta badda iyo xoojinta shahwada uu xiriir rasmi ah ka dhexeeyo hadana hadallada ku saabsan arrimahaas ayaa ah kuwo aad u badan.
Maadada Zinc oo la sheegay inay horseedo nafaqada soo saarta biyaha ragga sarena u qaadda ayaa la sheegay in laga helo cuntada caroogta badda ku dhex jirto.
Maadada lagu magacaabo Zinc, ayaa la sheegay in lagu daaweeyaa dhalmo la’aanta iyadoona sidoo kale sare u qaadda tayada biyaha ragga, sida lagu sheegay daraasad dhawaan lasoo saaray.
Miraha kala ah, Bocorka, digirta, Cheese iyo Caanaha ayaa sidoo kale aga helaa maadada Zinc, iyadoo sidoo kale hilibka uu kamid yahay waxyaabaha laga helo maadadaas.
Shukulaatada ayaa waxaa laga helaa maaddo lagu magacaabo phenylethylamine, waxaana maadadaas la sheegay inay xoojin karto shahwada inkastoo aanan la xaqiijin balse miraha geedka laga sameeyo shukulaatada ee Cocoa ayaa gacan ka geysata sare u qaadidda dhigga jirka bini’aadamka.
Basbaaska, ayaa muhiim u ah bini aadamka gaar ahaan howsha sariirta. Basbaaska ayaa la sheegay inuu sare u qaado shaqooyinka jirka bini aadamka sida, shaqada wadnaha iyo heerkulka jirka, waxana arrimahaan oo dhan ay dhacaan marka uu qofku ku guda jiro shaqada sariirta.
capsaicin oo ah maaddo muhiim ah ayaa laga helaa Basbaaska taasoo daaweysa xanuunka murqaha iyo dhabar xanuunka.
Yareynta daciifnimada xubinta taranka
Miraha ayaa laga helaa waxyaabo muhiim ah oo ka qeyb qaata yareynta tabar darida ama awood yarida xagga xubinta taranka, sida lagu shaaciyay daraasado badan.
Liin Bambeelmada ayaa si gaar ah loo amaanay oo la sheegay in maadooyin ku jira ay xoojiyaan xubinta taranka.
14% ayaa la sheegay in cunista miraha ay xoojiyaan shaqada taranka halka dhirta kale ay 21% xoojiso.
Seynisyahanada, ayaa xusay in miraha sida, Ansalaatada iyo canabka ay ku jiraan maadooyin ragga caawiya marka ay noqoto howsha sariirta.
Khabiir ka faalooda arrimaha gogosha oo lagu magacaabo Dakhtar Krychman, ayaa sheegay in laga yaabo in qofka ay heyso dhibaato caafimaad haddii uu dhibaato kala kulmo howsha sariirta, isagoona kula taliyay inuu la tashado dhakhtar caafimaad.
Waxyaabo Fudud Oo La Sameeyo Marka Lamaanahaagu Uusan Ku Dhageysan
UGAAR AH RAGGA: 3 Sabab Oo Gabadha Ay Kugu Nici Karto
Heesta Boodhari Ee Fanaanka Ahmed Aarshe Oo Qoraal Ah [Markii Aan Wada Bohownay Dhexdeena Jacayl Ka Beermay]